Izindaba - Ezinye Izinto Ezibalulekile Ukukhetha I-Roof Rack
Kochwepheshe besimanje nabaphathi bemikhumbi, ukukhetha i-rack rack ye-SUV engcono kakhulu ezinhlobonhlobo zamamodeli ongakhetha kuzo kungaba nzima.Ngakho yiziphi izici ezibalulekile okufanele uzinakei-roof rack yezinga eliphezulu?
1. Amandla nokusebenza.
I-roof rack yeloli yezohwebo kufanele iqine futhi ihlale isikhathi eside.Ngesikhathi esifanayo, umthamo omkhulu wokuthwala umthwalo ubalulekile kunoma iyiphi indawo yokusebenza.Ukuchayeka emigwaqweni enzima nezindawo ezingaphandle kusho ukuthi izinto zokusebenza nazo zidinga ukumelana nokugqwala.
Ukuze uqinisekise impilo yesevisi ephezulu ye-rack rack, ukuhlolwa okuphelele kokuqina kuyadingeka.Lokhu kuqala ekuqaleni kwenqubo yokuklama, futhi onjiniyela bangaphakathi kufanele basebenzise isofthiwe yokuhlaziya ethuthukisiwe ukuze babone futhi basuse noma yibuphi ubuthakathaka obungaba khona.Ama-prototypes angokomzimba abe esedalwa bese kwenziwa izivivinyo ezilimazayo ukuze kuqinisekiswe amandla amakhulu kuzo zonke izindawo.Umklamo okhona nawo udinga ukuthuthukiswa njalo.Le ndlela ihlinzeka ngophahla olumangelengele kakhulu olunamandla okuthwala umthwalo oholayo.
Ama-roof racks kumele futhi asebenze kakhulu.Ukukhetha i-roof rack efanelekile kulokhu kuzosiza ukuthuthukisa indawo yokusebenza yabasebenzisi be-SUV.
2. Aesthetics kanye aerodynamics.
Imigqa ebushelelezi nemininingwane ecijile iba indinganiso yabo bonke abakhiqizi-imvamisa bathintwa imizamo yokwenza ukubukeka kube lula ukuze kuthuthukiswe i-aerodynamics.Ngakho-ke, ama-roof racks anamuhla adinga ukufanisa lo mqondo wokuklama.
3. Ukulingana okuphezulu
Kuphoqelekile ukuthi uqinisekise ukuthi i-roof rack ilungele uhlobo, i-wheelbase nobude be-SUV.Ama-roof racks afakwe kahle awabukeki nje engavamile, kodwa futhi anciphisa ukutholakala nokuphepha.Ukukhetha idizayini elungiselelwe kusiza futhi ukwenza ukulingana kube lula.
4. Idizayinelwe ukuthuthukisa ukusebenza kahle.
Ukuthuthukisa ukusebenza kahle kukaphethiloli kuwumgomo wawo wonke amaSUV.Ngaphezu kwalokho, ukuze usize ukunciphisa umthelela emvelweni, amaSUV amaningi asebenzisa izimoto zikagesi.Ukuthi ugesi wonke, ingxubevange noma ukuvutha okumsulwa-ukukhetha i-rack rack enesisindo esilula nokusebenza okungcono kwe-aerodynamic kungasiza ukukhulisa amakhilomitha kanye nokusebenza kahle kukaphethiloli.
I-roof rack ye-Leader Accessories ithuthukiswe ngokucophelela futhi yalungiswa, ngokugcizelelwa okukhethekile ekusebenzeni, isisindo, i-aerodynamics nokuqina, ukuqinisekisa ukuthi ochwepheshe nabaphathi bemikhumbi bathuthukisa ukukhiqiza ngenkathi begcina ukusebenza kahle kwemoto.